Ny fomba fanafody fanandramana J147 (1146963-51-0) dia mamerina ny Alzheimer sy ny fahanterana
Fanafody fanandramana J147 (1146963-51-0) Ny fahanteran'ny Alzheimer
/Blog/J147/Fanafody fanandramana J147 (1146963-51-0) Ny fahanteran'ny Alzheimer
Posted on 07 / 10 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao J147. Manana izany 0 Comment.
Ny fikarohana aretina Alzheimer dia nahasarika sasantsasany sainam-panahy sasantsasany tao amin'ny fikarohana momba ny fitsaboana nandritra ny taona 20 taloha. Na dia niana-javatra betsaka momba ireo aretina aza ny mpikaroka, ny fiheverany, ary ny fanodikodinam-pony, dia nisy fiantraikany kely teo amin'ny ady amin'ny aretina.
Ny ekipa ao ambadiky ny zava-mahadomelina J147 (1146963-51-0) dia nanapa-kevitra ny hanao fomba hafa. Ny valiny voalohany dia mahatalanjona, ary ny mpikaroka dia manohy mandinika ny fomba fifandraisan'ny zava-mahadomelina vaovao amin'ireo sela samihafa ao amin'ny vatana.
Inona ny J147?
Ny J147 dia poofa nootropique voalohany novolavola tamin'ny 2011. Hitan'ny mpikaroka fa mety hampihemotra ny fahatsiarovan-tena ny rongony, amin'ny alalan'ny fianarana maro samihafa, ary miadana, na manodina mihitsy aza, amin'ny totozy Alzheimer.
Ny vovony J147 dia hydrazide phenyl. Avy amin'ny curcumin avy amin'ny curryompy. Toetry ny ambany izy io. Na teo aza ny ahiahy sasany teo aloha, ny poezia J147 dia tsy nasiana koziorogenika. Ny mpikaroka dia nisedra be dia be noho io fisainana io tamin'ny alalan'ny fandinihana ny metabolites of J147 amin'ny microsomes amin'ny olombelona sy ny tazo ary ny tazo.
Ny valiny dia mampiseho fa ny J147 dia tsy manabolized amin'ny amine na hydrazine aromatika.
Fomba nentim-paharazana hiadiana amin'ny Alzheimer
Ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina novolavolain'ny taona 20 dia lasibatra amin'ny toeram-ponenana amyloid ao amin'ny atidohan'ny marary Alzheimer. Izany fomba fijery izany dia mahatonga ny fahatsapana ho lasa saina satria ireo tahiry ireo dia izay mangeja ny sela nervey ho faty.
Na dia izany aza, aorian'ny taona 20 dia tsy nisy fandrosoana lehibe teo amin'ny fitsapana ara-pitsaboana tamin'ny iray amin'ireo zava-mahadomelina izay mikendry ny fametrahana takelaka.
Ny fomba fiasa mifandraika dia natao hanandrana sy hamelezana ny amyloid alohan'ny hamolavolana ny fonosana. Ny amyloid dia manimba synapses alohan'ny hidirany ao amin'ny claques. Na izany aza, na dia efa tsy voaporofo aza fa lasibatra ity tetikady ity.
Mandra-pivoaran'ny J147 (1146963-51-0), ny fitsaboana ny Alzheimer dia nijanona. Tsy nisy lalana mazava ho azy ireo tamin'ny iray amin'ireo zava-mahadomelina izay naparitaka nandritra ny taona 20 teo aloha ary ny tsy fahampian'ny aretina dia tsy nampindrana ny fomba fijery hafa.
Ahoana ny fomba fiasan'ny J147 (1146963-51-0) amin'ny alàlan'ny Alzheimer's
Ny ekipa ao ambadiky ny J147 dia nanapa-kevitra ny handray fepetra hafa amin'ny ady amin'ny Alzheimer. Raha tokony hampiasa zava-mahadomelina iray hafa izay mikendry amyloid, ny ekipa dia nanapa-kevitra ny hifantoka amin'ny anton-javatra lehibe ho an'ny Alzheimer. Ny tena lehibe indrindra amin'ny loza mety hitranga dia ny fahanterana-ka ny ekipa dia nanosika ny ezaka ho an'ny rafitra manohitra ny fahanterana.
Ny ekipa dia namorona J147 amin'ny fampiasana sary miainga amin'ny sela manohitra ny fanoherana ny atidoha. Avy amin'ireny horonan-tsary ireny, dia nanamboatra ny vovony J147 izy ireo.
Ny pneoma J147 dia miasa amin'ny fampihenana ny asan'ny ATP synthase ao amin'ny mitochondria. Ireo sela voaaro amin'ny fahasalamana avy amin'ny ankamaroan'ny tosiikan'ny ati-doha. Ny fikarohana dia nanamarika ny antony mahatonga io fitambarana io hamokatra io fiantraikany amin'ny tsy fahasalamana io satria vokatry ny fipoiran'ny excitotoxicity amin'ny selan'ny aty amin'ny sela.
Nanjary simba ny neurônina ary novonoin'ny fanesorana ireo mpitsabo ireo ho an'ny glutamate ny neurotransmitter. Ny J147 dia mampihena ny fizotran'ny tsindry alohan'ny zatovo efa antitra efa ela. Izany dia mitahiry ny neurons ary, raha ny tena izy, dia mety hanosika ny famerenana ny sasany amin'ireo vokatry ny Alzheimer kokoa.
J147 Miasa amin'ny maha-mpitsabo manohintohina
Ny mekanika ao amin'ny J147 dia tsy misy toy ny fanafody alz'gera hafa izay nahatratra dingana mitovy amin'ny fikarohana. Satria tsy mifantoka amin'ny taova nentim-paharazana ilay aretina izy, fa kosa manampy amin'ny fanalefahana ny loza ateraky ny loza mety hitranga.
J147 dia miasa toy ny mpitsabo mpanohitra. Miankina amin'ny fitaovany manokana ny atidohan'olombelona, ​​ka manatsara ny tosi-drà. Izy ireo no toetrandro mifandraika amin'ny taonany izay mamolavola ny tontolo iainana ho an'ny Alzheimer. Ny J147 dia mamerina ny famantaranandro amin'ireo zava-mampidi-doza ireo, ary izany dia mahatonga ny Alzheimer hampihena ny asany amin'ny fampihenana ny rafitra fahatsiarovana samihafa.
Azo inoana fa ny fanampiana alefan'ny J147 dia mety hanampy betsaka kokoa noho ny ady atao amin'ny Alzheimer ihany. Ireo mpangalatra fiarovan-tena toy izany dia mety afaka mifantoka ny toetoetra hafa izay miteraka aretina sy aretina hafa izay ny taona irery no tena fototry ny loza. J147 tsy fanafody Alzheimer fotsiny. Tena zava-mahadomelina izay manampy amin'ny famerenana ny fahanterana.
J147 Fitsapana ara-pitsaboana
Na dia novolavolain'ny 147 aza i J2011, dia efa manakaiky ny fankatoavana ny fisedrana amin'ny ankapobeny. Etsy ankilany, ny J147 dia naseho fa tsy mahomby fotsiny, fa naseho ihany koa fa azo antoka.
Ny voalohany niahiahy momba ny mety hisian'ny J147 ho kansera, na tsy misy poizina, dia hita fa tsy marim-pototra.
Ny mpikaroka dia manahy ny amin'ny fitsaboana ny fitsaboana amin'ny ankapobeny ary ny ankamaroan'ny mpikaroka rehetra ao amin'ny fikarohana Alzheimer dia manantena fa ho mandaitra amin'ny olona ny J147 toy ny tamin'ny totozy sy ny simba.
Fikarohana J147 voalohany
Tany am-piandohan'ny mpikaroka dia nahita fa J147 (1146963-51-0) dia afaka misoroka, ary mamerina, ny fahatsiarovan'ny totozy amin'ny alàlan'ny totozy amin'ny alàlan'ny Alzheimer. Na izany aza, satria manantena ny vokatr'izany, amin'ny olona, ​​dia ny 1% amin'ny marary Alzheimer ihany no manana ny lovan-drazana. Ny endrika mahazatra indrindra amin'ny Alzheimer dia tsy mifandray amin'ny karazana génétique manokana, fa amin'ny fahanteran-tena ihany koa.
Ny ekipa noho ny nijereny ny vokatry ny J147 amin'ny vondrona tebiteby izay mahatsapa haingana ary mahatsapa endrika miendaka mitovy amin'ny aretin'ny Alzheimer hita amin'ny olombelona.
Ny valin'ny fanadihadiana faharoa ihany koa dia nampanantena ihany koa. J147 dia afaka nanavotra ny tsy fahampian'ny kognitika, na dia tamin'ny fitsaboana azy aza tany am-piandohan'ny aretina. Nanatsara ny fahatsiarovan-dry zareo ny totozy ary nanakana ny fahasimbana bebe kokoa.
Hita ihany koa fa rehefa nifampiraharahana niaraka tamin'ny donepezil i J147 dia niasa tsara kokoa tamin'ny famerenana ny fahatsiarovan-tsoratra sy ny fahatsiarovana. Saingy, J147 irery no ambony noho ny famerenana ny fahatsiarovana ny habakabaka.
Inona no mitazona ny hoavy? J147 (1146963-51-0)
Mbola misy lalana lava vitsivitsy mialoha ny J147 (1146963-51-0) dia ahafahana mitsabo ny ankamaroan'ny marary Alzheimer. Voalohany dia tsy maintsy mameno ny dingana henjana ny fitsaboana. Raha vao voamarina ny fitsapana momba ny fitsaboana, dia hanomboka ny dingan'ny FDA.
Ny mpikaroka dia mahatsiaro ny filàna maika ho an'ny fitsaboana manan-danja ho an'ny aretin'i Alzheimer, saingy nanolo-tena koa izy ireo ny tsy hitsoaka ny siansa. Hatreto, ny valiny rehetra ho an'ny J147 dia tena tsara ary tsy misy fanafody Alzheimer hafa efa nijery io tsara io hatramin'izao.
Momba ny J147:
Tags: mividy J147 vovoka, J147 vovoka
Ny fampidiran-danja indrindra amin'ny vovoka azetrol Megetrol Levonorgestrel: Ny fomba fiasa, ampiasaina, ny vokatra hafa